2018 | portal │ပညာရှင် Hans Kottke
2018/2019: Happy Holidays နှင့် HAPPY
ဤတွင်ကင်မရာနှင့်အတူအနည်းငယ်စမ်းသပ်မှုရဲ့ Symax360. အရည်အသွေးအထူးမဟုတ်ပါဘူး, ကင်မရာအဘို့အစျေးပေါဖြစ်ပါသည်.
ဒီဇင်ဘာလ 19, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: 360 မြို့, နှစ်သစ်ကူး, Symax360, ခရစ္စမတ်.
categories: 2018, ယေဘုယျ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
Homeopathy - နူးညံ့သိမ်မွေ့အခြားရွေးချယ်စရာသို့မဟုတ် dreister Humbug?
ဒီဇင်ဘာလ 17, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: homeopathy, Humbug, ဆေးဝါး, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ, ရှမွေလသည် Hahnemann.
categories: 2018, ယခု, ယေဘုယျ, နောက်ခံ, ဆေးဝါး | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
1918 – က Braunschweig အတွက်တော်လှန်ရေးခဲ့သည်?
လက်ရှိအများကြီးမေးခွန်းတစ်ခုကိုအောက်မှာမြို့နှင့်တိုင်းပြည် Braunschweig အတွက်နိုဝင်ဘာလတော်လှန်ရေးကုသအကြောင်းကို Dietrich Kuessner ဆွေးနွေးပွဲ:
အခြေပြုခဲ Kuessner အစိုးရနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဆက်လက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးပေးသတင်းရပ်ကွက်များကကိုးကား, အစောပိုင်းတစ်ဦးတော်လှန်ရေး savaging. သူက "ဘုရင်စနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီ မှစ. " အချိန် display ကိုမရှိရင် Wulf Otte နှင့် Maik ထုတ်ဝေသောအဖြစ်သူ၏စောင်ကိုဦးဆောင်ဆက်ပြီး.
Dieterich Kuessner, အဆိုပါလူသာရဘုရားကျောင်းဈ Brunswick အတွက်သင်းအုပ်ဆရာ. R ကို. သူအတွက်နောက်ဆုံးင် 40 နှစ်ပေါင်းပြင်းထန်စွာအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းနှင့် Braunschweigischer Braunschweigische လူသာရဘုရားကျောင်းလေ့လာ.
နိုဝင်ဘာလ 16, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: 1918, Braunschweig, Dietrich Kuessner, ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ, နိုဝင်ဘာလတော်လှန်ရေးတွင်.
categories: 2018, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig, သမိုင်း, နောက်ခံ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
သူ Uwe Meier နှင့်အတူတွဲရှိဝီလီ Wimmer …
အဓိကခေါင်းစဉ်အပေါ်အဖြစ်အပျက် “ငြိမ်းချမ်းရေး” ဟောင်းတဦးပါလီမန်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးဝီလီ Wimmer နှင့်အတူဧဝံဂေလိအကယ်ဒမီဆရာတော်ကြီးဂျေရုဆလင် (CDU), အဆိုပါညီအစ်ကိုတို့များ၏ဘုရားကျောင်း၌ဤအချိန်နေရာယူ. ဒီအကြောင်းပြချက်, နားထောင်တဲ့ သာ. ကြီးမြတ်အရေအတွက်ကမျှော်လင့်ထားကြောင်း. Wimmer အချို့ဟောင်းတဦးပါလီမန်Staatssekratärမဟုတ်ပါဘူး. သူဟာနှစ်ပေါင်းနိုင်ငံရေးအရအများပြည်သူပါဝင်ပတ်သက်နေသည်. အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးမှာ, အခါရုရှားနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရေးမှကြွလာ.
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမချဲ့ကား, ကအခိုင်အမာလျှင်, Wimmer ရုရှားဂျာမနီနှင့်အီးယူအကြားကောင်းသောအိမ်နီးချင်းကောင်းဆက်ဆံရေးဟာတစ်တိုက်လေယာဉ်ခဲ့ကြောင်း. တစ်ဦးကောင်းဂျာမန်ရုရှဆက်ဆံရေးသည်မိမိစဉ်ဆက်မပြတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု, သူသည်မိမိကျယ်ပြန့်ပြင်ပကနေကြာ- အဆိုပါပျတိုးနှငျ့ ပတျသကျ. ရုရှားနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်နေတိုး၏ကတိတော်များနဲ့သူ့ရဲ့သက်တမ်းကာလအတွင်းနှင့်ကာကွယ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်များစွာတွေ့ဆုံ. Wimmer ကိုဆိုဗိုစစ်ပွဲဆန့်ကျင်ကိုလည်းခဲ့သည်, အနီရောင်အစိမ်းရောင်အောက်မှာကောက်ယူခဲ့ကြရာ, နှင့်အထွေထွေအတွက်သူစစ်ပွဲများတစ်ဦးကြီးများပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်, ပြီးခဲ့သည့်အတွက် 40 နှစ်ပေါင်းနဲ့အတူအနောက်နိုင်ငံတွေဦးဆောင်တဲ့ခဲ့ကြသည်.
အောက်တိုဘာလ 24, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: Bautzner Friedenspreis, အမေရိကန်, အင်တာဗျူး, နေတိုး, ရုရှားနိုင်ငံ, သူ Uwe Meier, ဝီလီ Wimmer.
categories: 2018, ယခု, ယေဘုယျ, နောက်ခံ | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
“ဆိုဗီယက်မှအားလုံးပါဝါ”- ဆိုဗီယက်ဒီမိုကရေစီ၏သမိုင်းနှင့်အမှန်တကယ် …
အဆိုပါကောင်စီလှုပ်ရှားမှုနိုဝင်ဘာနေ့၏နိုင်ငံရေးကသောင်းကနင်းနေရာ ယူ. , 1918 နှင့်ဂျာမနီမှာအထှတျအထိအောက်ပါလ,. အလုပျသမား- နှင့်စစ်သားများ '' ကောင်စီသူများလူမျိုး၏ unmittebare စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ပထမကမ္ဘာစစ်၏ရလဒ်အဖြစ်ဆိုဗီယက်ပုံစံနှင့်နိုဝင်ဘာလတော်လှန်ရေးအပြီးပေါ်ထွက်လာ, ယခင်မူဝါဒကဆန့်ကျင်လှည့်အရာ. သူတို့ကဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့အာဘော်ခဲ့ကြသည်. သူတို့ကနိုင်ငံရေး၏အစွန်းရောက်ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေး၏ရည်မှန်းချက်ကို လိုက်., နှင့်စီးပွားရေးထုတ်လုပ်မှု, သော့ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအသင်းအဖွဲ့များက.
အလုပျသမား- အမည်ရစစ်သား '' ကောင်စီနိုင်မှဒီမိုကရေစီရာ၌ခန့်ထားပြီ, အရင်းရှင်စနစ်အပေါ်သို့သော်မအောင်မြင်ခဲ့.
– ရာစုနောက်ပိုင်းတွင် – ကျနော်တို့ဒီမိုကရေစီဟာတိုက်ရိုက်ပုံစံအဖြစ်ကောင်စီ၏ system ကိုပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းချင်ပါတယ်.
ကျနော်တို့စိတ်ကူးများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုဇစ်မြစ်၏သမိုင်းအဘို့ကိုမေး, သမိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏မြင်ကွင်းကိုအတွက်ယူချင်, ခြေရာခံဖို့, အရာအကျိုးစီးပွားဆိုဗီယက်လှုပ်ရှားမှု၏နိဂုံးကိုမှဦးဆောင်ကြလိမ့်မယ် .
ဒါပေမဲ့ဂျာမနီရှိကောင်စီလှုပ်ရှားမှုပျက်ကွက်လျှင်ပင်, သေးသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးယနေ့တိုင်အောင်အခေါင်းမာမာပေါ်မှာအသက်ရှင်တော်မူသည်, အကြိမ်ကြိမ်တက်ယူနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ပါတယ်.
ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ကောင်စီဒီမိုကရေစီ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူပြင်းထန်စွာတစ်ဦးတည်းဖြတ်ကျွမ်းကျင်သူဆွေးနွေးမှုနှင့်တစ်ဦး In-depth နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နေကြသည်နှင့်ပင်လက်ရှိအခြေအနေအရရှေ့ထင်နှင့်ဆွေးနွေးရန်.
Prof.Michael Buckmiller (နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်, Hannover)
ဒေါက်တာ. Bernd Röttger (လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်, Braunschweig)
အောက်တိုဘာလ 6, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: 2018, အလုပျသမား '' ကောင်စီ, Braunschweig, ဒီမိုကရေစီ, နိုဝင်ဘာလတော်လှန်ရေးတွင်, ဆိုဗီယက်ဒီမိုကရေစီ, စစ်သား '' ကောင်စီ.
categories: 2018, ယခု, ယေဘုယျ, သမိုင်း, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
အတတ်ပညာ: မြေပုံများအား အကယ်. – Geopolitisches Store က
အလွန်သိကောင်းစရာများထုတ်လွှင့် “မြေပုံများအား အကယ်.” တှေ့ရှိ > ဒီမှာ
အောက်တိုဘာလ 2nd, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: အတတ်ပညာ, ပထဝီနိုင်ငံရေး, မဂ္ဂဇင်း, မြေပုံများအား အကယ်..
categories: 2018, ယခု, ယေဘုယျ, နောက်ခံ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
Braunschweig အတွက်နျူကလီးယားကုမ္ပဏီ၏မတော်တဆ – နေထိုင်သူများပညာရေးဘို့စစ်တိုက် …
စက်တင်ဘာလ 19, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: နျူကလီးယားစွန့်ပစ်, Eckert & Ziegler, GE Healthcare, Nuklearfirma, မတော်တဆထိခိုက်မှု, Thune.
categories: 2018, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig, နောက်ခံ, ဆေးဝါး | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
Antikriegstag 2018 Braunschweig အတွက် …
100 ယင်းပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း 1. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကျနော်တို့အပေါ်ဆန့်ကျင်စစ်တစ်ရက်ယူ 1. စက်တင်ဘာလ (တစ်နှစ်ပတ်လည်အဖြစ်
အဆိုပါရဲ့ start 2. ကမ္ဘာကြီးကိုစစ် II ကို) အခါသမယ, ယင်းဆောင်ပုဒ် "ဘယ်တော့မှနောက်တဖန်စစ်, ဘယ်တော့မှမနောက်တဖန်ဖက်ဆစ်ဝါဒ "ကို
အဆိုပါစစ်ပွဲများနှင့်ပဋိပက္ခများအတွက် 21. ရာစုနှစ်က (u.a. အာဖဂန်နစ္စတန်, အီရတ်, လစ်ဗျားနိုင်ငံ, ဆီးရီးယား, ယူကရိန်း, ယီမင်, ဣသရ /
ပါလက်စတိုင်းနှင့်တူရကီ / ဒျ) ထက်ပိုရှိသည် 1 သေလွန်သောသူတို့သည်တစ်သန်းတောင်းဆိုနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသောဒဏ်ရာရ.
တစျခုလုံးကိုဒေသပျက်စီးခြင်း, တည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည့်ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း. ဆီးရီးယားအတွက် AWACS Bundeswehr မစ်ရှင်အားဖြင့်ဥပမာအားနိုင်ငံတကာဥပဒေများ၏မျိုးစုံချိုးဖောက်မှု, လုံခြုံရေးမူဝါဒအဘေးဥပဒ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်.
ယူအက်စ်အေ (စတုဂတ်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာစစ်ဌာနချုပ် AFRICOM နှင့် Ramstein အတွက်နေတိုး၏လေယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ).
အဆိုပါဂျာမန်အစိုးရBüchelအမေရိကန်နျူကလီးယားလက်နက်များထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ tolerates, ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမ, ဒါပေမဲ့
ရှိပါတယ် "ခေတ်မီ" နေကြတယ်. သူမသည်ဆက်လက်ငြင်းဆန်, ၏ 122 ကုလသမဂ္ဂတိတ်မွေးစား
မပြေးဖို့လူသန်းပေါင်းများစွာအတင်းအကျပ်လုပ်ဆောင်ချက်များ – ဥရောပမှ. ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူ,
ထို Frontex တပ်ဖွဲ့တွေတိုးနှင့်တိုးမြှင့်နယ်စပ်လုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဆက်လက်ဖြစ်ပါသည်
ရဲဥပဒေများအောက်ပိုင်း Saxony အတွက်တင်းကျပ်ပါလိမ့်မည်. ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား, ထောက်လှမ်းရေးနှင့်
မငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု၏မိတ်ဆွေများကမတိုင်မီတင်းကျပ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအောင်, မဟုတ်ကအတွင်းစိတ် secure ပါဘူး
အဆိုပါမြင့်တက်ကုန်ကျစရိတ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာ – စီစဉ်ထား 2% အဆိုပါစုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် – ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်၏နီးပါးနှစ်ဆဆိုလို. ဤရွေ့ကားနောက်ထပ်များမှာ 30 ဘီလီယံအထိ, လူမှုရေးအတွက်လိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု,
အိမ်ရာ, ပညာရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများတားဆီး. ဒါဟာလူထုကြိုက်တောင်းဆိုချက်များကိုနှာများနှင့်
စက်တင်ဘာလ 1st, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: 2018, Antikriegstag, Braunschweig, ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ.
categories: 2018, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
သြဂုတ်လ 18, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: Braunschweig, ဆန္ဒပြ, ရဲတပ်ဖွဲ့အက်ဥပဒေ.
categories: 2018, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig, နောက်ခံ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
စာမျက်နှာများ: 123 နောက်တစ်ခု
22 အသုံးပြုသူများသည် အွန်လိုင်း
ဆိုက်ကိုမာတိကာ: ©2018 portal │ပညာရှင် Hans Kottke
Wed Jun 26th 15:02:37 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန် 2019